बुधबार, चैत १८, २०७७ सारङ्गी न्युज
मान्छे कति बैगुनी हुँदोरहेछ, विगतका घटनाहरूलाई स्मरण गरेर वर्तमान सपार्न नजान्दा जीवन बरबाद हुने गरेको देखिन्छ । मानिस औधी स्वार्थी र सुविधाभोगी हुन्छ । आफूले सुख भोग गर्दा अरुलाई कति असर परेको हुन्छ भन्ने कुराको पहिचान उसले गरेको हँुदैन । समाजमा अनगिन्ती घटनाहरू घटिरहन्छन्, मानिस विभिन्न भोगाइलाई सहिरहेको हुन्छ तर पनि अगाडिको स्थितिलाई मात्र हेर्न पुग्दा सम्पूर्ण जीवन नै दुर्घटित हुन पुग्छ ।
एक दिन च्यान्टीले भनी, “छिमेकी रमाका श्रीमान्ले गहना किनिदिएछन्, मलाई पनि सिक्री, औंठी, नौगेडे त बनाइदिनुपर्‍यो । नभए बस्दिनँ गोठालो भएर ।”
खिमेको विवाह १५ वर्षको कलिलो उमेरमा १२ वर्षकी च्यान्टीसँग भयो । गाउँले परिवेश, त्यसमा पनि ब्राह्मण परिवारकी बुहारी हुनुपर्दा घर खान निकै असहज भयो उसलाई । उमेर सानै भएकाले केही दिनका लागि माइत गई र उतै बसी । घरायसी स्थिति नाजुक भएकाले बालाई निकै कठिनाइ आइपरेको बेला बाले खिमेलाई भने, “बाबु जेनतेन १० पढिसकिस्, अब जागिरमा जानुपर्छ कि ? घर व्यवहार चलाउन पनि मुस्किल हुँदै आयो ? कसो गर्ने हो ? सोचविचार गर ।” त्यसपछि खिमे काठमाडौँतिर सानो मास्टरी गर्न पुग्यो । घरमा कामको चटारो भएपछि च्यान्टीलाई ससुराले घरमा नै ल्याए । बिहान सबेरै उठ्नु, दैलोपोतो गर्नु, गोडमेल, घाँसदाउरा, अर्मपर्म, खेतीपाती सबै काम च्यान्टीको काँधमा आयो तैपनि सासु बुहार्तन, घरायसी स्थितिको सामना, पारिवारिक सम्बन्ध मिलाउन पर्दा निक्कै कठिन थियो च्यान्टीलाई । पति २÷३ महिनामा दुई दिन बस्ने गरी आउने, केहीमा पनि सहयोग पाइने होइन । अति कठिनाइका बाबजुद टाढाको गाउँबेसी गर्दै जीवन व्यतीत गरी च्यान्टीले । बेलामा खान पाउने स्थिति थिएन त्यति बेला । सासु भन्ने गर्थिन्, “काम गरेको पनि के यस्तो ? जता हे¥यो उतै बिग्रेको छ ? अरुका बुहारी सबै काम कति राम्रोसँग गर्छन् । हाम्रा त ...के ? मेरो त पुर्पुरो नै अभागी, कसलाई के भन्नु र ? काम गर्न नसके बाटो लाग है चनमती ?” सासुका बुहार्तन खप्न नसकेर च्यान्टी एक्लै कुना बसेर रुन्थी ।
वैशाखको महिना, मकै गोडमेल हुँदै थियो । च्यान्टी कराउन लागी, “लौ न, मेरो पेट दुख्यो, पानी खान्छु ?” छिमेकी दिदीले कुरा बुझिन् र उसलाई घरमा लगिन् । “पानी फुकेर ख्वाउन प¥यो ?” केही समयको अन्तरालपछि छोरो जन्मियो । परिवार तथा छिमेकमा खुसीयाली छायो । छोरा सानो खियौटे भएकाले लुरे भन्न थाले सबैले । दिनहरू बित्दै गए । अब च्यान्टीलाई घर खान अलि सहज भयो । पारिवारिक स्थिति समाल्दै जाँदा उसले छोरी डल्ली र सानो छोरा नरेलाई पनि जन्म दिइसकेकी थिई । त्यसपछि घरमा देवरानी पनि आइन् । घरको काम धेरै सहज भयो । घर अलिक चर्को भएर होला, कसैले पनि कुरा काट्ने र विरोध तथा विपरीत कार्य गर्ने आँटै थिएन र हँुदैनथ्यो पनि । आमा बाका अगाडि सबै थर्कमान नै थिए । देवरानीका पनि छोराछोरी भइसकेपछि घरमा बेमेल सुरु भयो । थोरैमा चित्त बुझाउने र छुट्याइदिने आशय आमाबाबुको रहेकाले टारी खेत र केही नगद लिएर खिमे परिवारसहित तराइ झर्‍यो ।
घर आउन रातै पर्‍यो । घरमा आउँदा च्यान्टी बम भइसकेकी थिई । मुस्किलले ढोका खोलेर भित्र पस्यो । ऊ रन्कन थाली । दिउँसो पनि खाजा खाने अवसर नजुटेकाले भोकले रन्थनिएको थियो खिमे तर घरमा आउँदा श्रीमतीको ताण्डव नृत्य । खानाको खोजीमा भान्सामा जान लाग्दा श्रीमतीसँग ठोकिन पुग्छ ऊ ।
पहाडको जागिर, छोराछोरी लालनपालन तथा परिवार व्यवस्थापन गर्न खिमेलाई मुस्किल मुस्किल परेको थियो । फोनको चलन नभएकाले खबर पाउन ज्यादै कठिन पर्दथ्यो । जेनतेन पातको साँघु पारिवारिक डुङ्गा चलिरहेको थियो । छोराछोरी पढ्दै थिए । जेठो नरे अष्टे«लिया जाने सुर कसेछ । च्यान्टी पनि त्यसमा राजी भई । छोराले भन्यो, “बा मलाई पैसा चाहियो । म विदेश जान्छु ।” खिमेले जति सम्झाए पनि नरे मानेन । च्यान्टीले भनी, “खोजेर पनि दिनुस् पैसा । पछि कमाउँछन् । लगानी गर्न केको कन्जुस्याइँ ।” च्यान्टीले डाँकाले टिपेपछि कसैको केही लाग्दैनथ्यो । ऋणधन गरेर नरे विदेश पुग्यो तर सहयोग पाउने कुरा त्यस्तै त्यस्तै नै रह्यो । दिनहरू बित्दै गए । तराईको गर्मी, त्यसमा पनि पहाडबाट झरेकाहरूलाई खपिनसक्नु हुन्छ नै । २०÷३० दिनमा खिमे बिदा लिएर घर जान्थ्यो, गर्मीले अत्याउँथ्यो उसलाई । ऊ भन्थ्यो, “तराईमा त राति पनि घाम लाग्ने रहेछन् । खप्न नसकिने भो ? पानी मात्र खाएर पनि पहाड नै स्वर्ग छ, म त पहाडै जान्छु ।” च्यान्टी र छोराछोरी भने त्यहीँ रमाएका थिए तर खिमे आफू खप्न नसकेकाले सस्तो मोलमा घरजग्गा बेचेर पहाडी उपत्यकामा चारआनामा झुप्रो बनाई बस्यो । च्यान्टीलाई काम गर्न नपर्ने भयो । आमाबा पनि कान्छासँग नमिलेर खिमेसँग नै आई बसे । उसलाई अझै दुःख थपियो ।
दुई वर्षपछि छोरीको बिहे ग¥यो । त्यसको लगत्तै कान्छो नरेले आमासँग केटी ल्याउने कुरा गरेछ । च्यान्टीले भनी, “नरेले केटी मन पराएछ, बिहे गरिदिनुप¥यो ? नभए भगाएर ल्याउने भयो ।” तुरुन्तै सम्बन्धलाई अघि बढाई बिहे गरिदियो खिमेले । नरेलाई पनि विदेशको भूतले छाडेन । उसले बाबुसँग भन्यो, “बा बुहारीलाई विदेश पठाउन पैसा चाहियो । यति बेला सम्झाउन सकिने अवस्था छैन किनकि दाजु गएपछि ऊ पनि जानुपर्ने भयो । त्यसमा पनि च्यान्टीको पूर्ण समर्थन थियो त्यहाँ । तराईमा सञ्चयकोषको रकम झिकी किनेको तीन कठ्ठा घडेरी थियो । खिमेले नरेलाई बोलाएर भन्यो, “तराईको घडेरी बेचेर पठाउनू ।”
कराहीको तरकारी सबै खन्याई र धकेली दिई । ऊ ढोकामा ढल्न पुग्यो । च्यान्टीले रन्कँदै भनी, “जहाँ जाने हो गए हुन्छ, मैले फेरि देख्न नपरोस्, बरु मरे पनि हाइसञ्चो हुने थियो ।” ऊ भट्भुटाउँदै ढोका थुनेर सुती ।
नरेले श्रीमतीलाई अष्टे«लिया पठायो र आफू पनि बल्लबल्ल तीन वर्षपछि उहीं गयो तर के कारणले हो कुन्नि सम्बन्धविच्छेद भयो । लकडाउनका कारण ऊ पनि बेरोजगार भएको खबर च्यान्टी सुनाउँछे । खिमे काम गर्न नसक्ने भइसकेको छ । विभिन्न घटनाक्रम र दुःखले गर्दा ऊ अपाङ्गजस्तै भएको छ । कमाइ नगरे खान नपुग्ने भएर ऊ तन्नेरी बनेर काममा दलिइरहेको छ । यसका बाबजुद च्यान्टीका कचकच र रिसले उसलाई पागलझैं बनाएको छ । हरेक समय च्यान्टी केही न केही निहुँ झिकेर झर्किइरहन्छे । छोराछोरी पनि उसैका पछि लाग्दछन् । एक दिन च्यान्टीले भनी, “छिमेकी रमाका श्रीमान्ले गहना किनिदिएछन्, मलाई पनि सिक्री, औंठी, नौगेडे त बनाइदिनुपर्‍यो । नभए बस्दिनँ गोठालो भएर ।” कालका अगाडि को बोल्न सक्छ र ! ऋण काढेर किनिदियो उसलाई । अब त सन्तोषको स्वास फेर्न पाउने झिनो आशामा थियो खिमे तर एकपछि अर्को कुराले डस्दै राम्ररी खानसमेत नपाउने भयो उसले । दिनहँुको टोकाइ, कामको बोझ, व्यावहारिक तनावले गर्दा विचरा खिमे मानसिक रोगी हुन पुग्यो ।
एक दिन कार्यालयमा मिटिङ भएकाले घर आउन रातै पर्‍यो । घरमा आउँदा च्यान्टी बम भइसकेकी थिई । मुस्किलले ढोका खोलेर भित्र पस्यो । ऊ रन्कन थाली । दिउँसो पनि खाजा खाने अवसर नजुटेकाले भोकले रन्थनिएको थियो खिमे तर घरमा आउँदा श्रीमतीको ताण्डव नृत्य । खानाको खोजीमा भान्सामा जान लाग्दा श्रीमतीसँग ठोकिन पुग्छ ऊ । त्यसपछि बसिनसक्नु भयो त्यहाँ । कराहीको तरकारी सबै खन्याई र धकेली दिई । ऊ ढोकामा ढल्न पुग्यो । च्यान्टीले रन्कँदै भनी, “जहाँ जाने हो गए हुन्छ, मैले फेरि देख्न नपरोस्, बरु मरे पनि हाइसञ्चो हुने थियो ।” ऊ भट्भुटाउँदै ढोका थुनेर सुती ।
लडेर मुर्छा परेको खिमे धेरै बेरपछि थरथर काम्दै उठ्छ । धेरै बेर भुइँमा बसेर एकोहोरो सोचिरहन्छ । सायद उसले उपायको खोजी गरिरहेको होला । त्यसपछि त्यहाँ कहिल्यै नफर्कने गरी सानो झोला काखी च्यापेर आँगनको माटोको टिका लगाई बाहिरिन्छ । ऊ कहाँ गयो पत्तै भएन ।
समय बित्दै गयो । खिमेले गरेको त्याग र लगानीबाट उसको महत्व सबैलाई झनै बढेर आयो । केही संस्थाले उसको जीवनी प्रकाशित गरे । सामाजिक असल व्यक्तिको उदाहरण दिँदा उसैको नाम लिने भए । सामाजिक संघ/संस्थामा लगानी भएकाले खोजतलास गर्ने कामलाई सर्वत्र अघि बढाए । छरछिमेक, इष्टमित्र, साथीभाइ सबैले खोजतलासमा जुटे । मिडियामा पनि सूचना राखियो तर पत्तो लाग्न सकेन । यता च्यान्टी पश्चातापमा डुब्दै अर्धपागल बनी । छोराछोरीलाई पनि बाबाको विछोडले रुनसम्मै रुवायो । उसको विछोडले सबै मानिसहरू पछुतोमा परे तर बिडम्बना सोझो, सामाजिक, असल अविभावक र कर्तव्यनिष्ठ खिमे कहिल्यै फर्केन ।
पोखरा–१०, मिलनटोल, कास्की
(कथाकार रामकोट मावि, रुपा-७, कास्कीका प्रधानाध्यापक हुन् ।)
बुधबार, चैत १८, २०७७, १९:३२:००
विश्व हिमोफेलिया दिवस मनाइँदै १४ मिनेट पहिले